LATAM Airlines Group Zvino Mafaira Chirongwa cheKuronga patsva kunze kweChitsauko 11
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » LATAM Airlines Group Zvino Mafaira Chirongwa cheKuronga patsva kunze kweChitsauko 11
LATAM Airlines Group SA nevamwe vayo muBrazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, neUnited States nhasi vazivisa kuiswa kweChirongwa cheKuronga patsva ("Chirongwa"), chinoratidza nzira yekuenda mberi kweboka kubuda Chitsauko 11. mukuteerana nemutemo weUS neChile. Hurongwa uhwu hunoperekedzwa neChibvumirano Chekugadziridza Rutsigiro (iyo “RSA”) neParent Ad Hoc Group, rinova ndiro boka guru revakweretesi vasina kuchengetedzwa munyaya idzi dzeChitsauko 11, uye vamwe vevaridzi veLATAM.
Iyo RSA inonyora chibvumirano pakati peLATAM, avo vambotaurwa vane vanopfuura makumi manomwe muzana ezvichemo zvisina kuchengetedzwa nevabereki uye vane 70% ye48 uye 2024 US Notes, uye vamwe vagovani vakabata zvinopfuura makumi mashanu muzana ezvakaenzana, zvichienderana nekuitwa kwe. magwaro echokwadi nemapato uye kuwanikwa kwemvumo yekambani nevaya vanogovana. Sezvavakaita panguva yese iyi, makambani ese ari muboka ari kuramba achishanda semamiriro ekufambisa uye mvumo yekuda.
"Makore maviri apfuura akaratidzwa nekuomerwa pasirese - takarasikirwa neshamwari nemhuri, vatinoshanda navo uye vadikani. Uye isu takasuduruka sekubhururuka kwepasirese uye kufamba kwakaunzwa pakumira nedambudziko rakakura kwazvo rekutarisana neindasitiri yedu. Kunyange hurongwa hwedu husati hwapera, tasvika padanho rakakosha munzira yekuenda kune remangwana rakasimba rezvemari, "akadaro Roberto Alvo, Chief Executive Officer weLATAM Airlines Group SA "Tinotenda mapato auya patafura kuburikidza. hurongwa hwakasimba hwekuyananisa kuti husvike pamhedzisiro iyi, iyo inopa kufunga kune zvine musoro kune vese vane chekuita uye chimiro chinotevedzera zvese zviri zviviri mutemo weUS neChile. Kuiswa kwavo kwemari nyowani yakakosha mubhizinesi redu chiratidzo cherutsigiro rwavo uye kutenda mune tarisiro yedu yenguva refu. Tinotenda nechikwata chakasarudzika kuLATAM chakatarisana nekusagadzikana kwemakore maviri apfuura uye kuita kuti bhizinesi redu rirambe richishanda uye kushandira vatengi vedu zvisina mutsetse sezvinobvira. "
Chirongwa ichi chinopa kuisirwa madhora mazana masere nemakumi mapfumbamwe emadhora muboka kuburikidza nemusanganiswa weiyo nyowani, zvinyorwa zvinoshandurwa, uye chikwereti, izvo zvinogonesa boka kubuda muChitsauko 8.19 nemari yakakodzera kuti iite hurongwa hwebhizinesi. Pakubuda, LATAM inotarisirwa kuve nechikwereti chakazara chinosvika madhora 11 bhiriyoni7.26 uye liquidity inosvika $1 bhiriyoni. Boka rakaona kuti ichi chikwereti chakachengetedzeka uye mari yakafanira munguva yekusagadzikana kwekuenderera mberi kwendege yepasirese uye ichaisa boka iri nani kuenda kumberi.
Kunyanya, Chirongwa chinotsanangura kuti:
• Pakusimbiswa kweChirongwa ichi, boka iri rine chinangwa chekuparura mari inosvika mamiriyoni mazana masere emadhora emamiriyoni mazana masere emadhora, yakavhurika kune vese vane masheya eLATAM maererano nekodzero dzavo dzekutanga pasi pemutemo wekuChile unoshanda, uye nekutsigirwa zvizere nemapato ari kutora chikamu muRSA, zvichienderana ne kuitwa kwemagwaro echokwadi uye, maererano nevanodzokera shure, kugamuchirwa kwemvumo yekambani;
• Makirasi matatu akasiyana emanotsi anoshandurwa achapihwa neLATAM, ese achapihwa preemptively kuvaridzi veLATAM. Kusvika pamwero usina kunyoreswa nevagovani veLATAM panguva yakatarwa yekodzero dzekutanga:
o Convertible Notes Kirasi A ichapihwa kune vamwe vese vasina kuchengetedzwa vakweretesi veLATAM mubereki mukugadzirisa (dación en pago) yezvichemo zvavo zvinotenderwa pasi peChirongwa;
o Convertible Notes Kirasi B ichanyoreswa uye kutengwa nevanotaridza vari pamusoro; uye
o Convertible Notes Kirasi C ichapihwa kune vamwe vakakweretesa vasina kuchengetedzwa semusanganiswa wemari itsva kuLATAM uye kupedzwa kwezvichemo zvavo, zvichienderana nemimwe mipimo uye zvibatiso nemapato anodzokera kumashure.
• Manotsi anoshandurwa ari eConvertible Classes B neC achapihwa, zvachose kana kuti chikamu, mukutariswa kwemupiro wemari mutsva wemari inosvika mabhiriyoni mana nemazana matanhatu emadhora yakatsigirwa zvizere nemapato eRSA, zvichienderana nekutambirwa kudzosera kumashure vagovani vemvumo yekambani;
• LATAM ichaunganidza mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu emadhora emadhora uye inosvika mabhiriyoni maviri nemazana maviri emadhora ekubhadharisa chikwereti chemari, zvinosanganisira chikwereti chetemu itsva kana mabhondi matsva; uye
• Boka rakashandisa zvakare uye rine chinangwa chekushandisa chirongwa cheChitsauko 11 kudzorera kana kugadzirisa marendi eboka epamberi pezvichemo, mari yechikwereti inotenderera, uye imwe nzvimbo yeinjini.
Kunzwa kubvumidza kukwana kweChitsauko 11 Kuzivisa Kuzivisa uye kubvumidza maitiro ekuvhota kunotarisirwa kuitwa muna Ndira 2022, paine nguva yakatarwa zvichienderana nekarenda yeDare. Kana Chirevo cheKuzivisa chakatenderwa, boka rinotanga kukumbira panguva iyo richatsvaga mvumo yeChirongwa kubva kune vanokwereta. LATAM iri kukumbira kunzwa kuti isimbise Chirongwa chichaitwa muna Kurume 2022.
Kuti uwane rumwe ruzivo, LATAM yakagadzira webhusaiti yakatsaurirwa: www.LATAMreorganizacion.com, uko vanobatana vanogona kuwana rumwe ruzivo rwakakosha nezve chiziviso ichi. Boka rakagadzirawo nharembozha yemibvunzo ine chekuita neChitsauko 11, inogona kuwanikwa pa:
• (929) 955-3449 kana (877) 606-3609 (US neCanada)
Iyo ine zvakare yakatsaurirwa email yekubvunza ine chekuita nekuronga patsva pa [email inodzivirirwa]
LATAM inorairwa mukuita uku naCleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP naClaro & Cia. sevanachipangamazano vezvemitemo, FTI Consulting sechipangamazano wezvemari, uye PJT Partners semubhengi wekudyara.
The Parent Ad Hoc Group, iyo inotungamirirwa naSixth Street, Strategic Value Partners, uye Sculptor Capital, inorayirwa naKramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Bofill Escobar Silva, uye Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn sevanopa mazano ezvemitemo uye Evercore sekudyara. banker.
Vagoveri vataurwa pamusoro apa vanosanganisira (a) Delta Air Lines, Inc., inorayirwa naDavis Polk & Wardwell LLP, Barros & Errázuriz Abogados, uye Perella Weinberg Partners LP segweta rezvemitemo uye mubhengi wekudyara, (b) Cueto Group neEblen. Boka, 2 rinorairwa naWachtell, Lipton, Rosen & Katz naCuatrecasas segweta rezvemitemo, uye (c) Qatar Airways Investment (UK) Ltd., vachipanga mazano naAlston & Bird LLP, Carey Abrogados, uye HSBC segweta rezvemitemo uye mubhengi wekudyara. . Vamwe vevagovani ava vanorairwa mune yavo yega neGreenhill & Co., LLC uye ASSET Chile, SA sevapi vezano vezvemari.
Daniel Pimental anoti:
Zvita 2, 2021 pa05: 23
Ongorora mhinduro dzakawanda dzatinadzo dzematambudziko ako akaomarara nemikana. Kunyange zvazvo nyika imwe neimwe muUnited States ine mitemo inodzora hukama pakati pevakwereti nevakweretesi vavo, mutemo wekutadza kubhadhara.